Madimikira uye Co-Tsamba dzeNzvimbo SEO | Martech Zone
Iyo pagerank algorithm yaive yakanyanya kutamba nekuti zvese zvaida yaive nhema-ngowani SEO munhu anovaka kiyi-yakapfuma zvinongedzo kudzokera kune saiti. Nekufamba kwenguva, zvisinei nekwakabatana pakavakwa, saiti yacho yaizokwira iri chinzvimbo. Google yaiziva kuti yavo yekutsvaga injini mhedzisiro yaive ichitambwa mutambo uye zvobva zvasimbisa maalgorithms avo kuti vatore mimwe mitsara yemhando yepamusoro. Hunhu hwenzvimbo yekubatanidza uye kukosha kwezviri mukati mavo vakaita chinhanho uye nemukurumbira masayiti anobatanidza uye nzvimbo dzekuenda dzaive mukati mezvenhau.
Chii chinonzi Citations? Kubatanidzwa?
Kana zvasvika kune yemuno yekutsvaga injini mhedzisiro uye chinzvimbo chebhizinesi rako, backlinks uye kutaurwa haisiriyo wega mutambo. Madimikira anoramba achikura mukuzivikanwa neGoogle yekutarisa huchokwadi uye chiremera chebhizinesi mumhedzisiro yekutsvaga. Tsananguro hadzisi chinongedzo, iwo mavara anokamuraniswa pakati pezvimwe zvinyorwa pane peji. Mumwe muenzaniso izere kero uye nhamba yefoni yebhizinesi rako.
Pasina zvinongedzo, Google inogona kuona mukurumbira webhizimusi rako remunharaunda nezvakawanda sei yepamusoro mhando nzvimbo dziri kunyora rako bhizinesi kero uye / kana nhamba yefoni. Izvi zvinozivikanwa sekutaura. Uye mamwe masaiti anonyora zvakafanana zvinyorwa zvinobatana kuburikidza nemasaiti zvinowirirana. Funga nezvazvo… kero yakanyorwa pane chero saiti inogona kuburitsa chinongedzo icho Google inoda kuona hukama pakati pezviri mukati nebhizinesi remuno.
Kunyora kero yako yebhizinesi uye nhamba yefoni pane peji rine mazwi akakosha ane chekuita nebhizinesi rako zvino anogona kukuwanisa iwe chinzvimbo cheiyo kiyi yekusanganisa musanganiswa munharaunda yekutsvaga mhedzisiro.
Izvi zvinoreva here kuti iwe unofanirwa kuenda kunotenga dhairekitori rekutumira pasuru yebhizinesi rako? Kwete. Google iri kutanga kusarura yakaderera madhairekitori ayo anongobatanidza mapurazi emabhizinesi. Nekudaro, ivo vari kubhadhara zvakanyanya kutarisisa kune anotora pane epamusoro mhando masaiti ari kunyora yako bhizinesi ruzivo. Basa rako ndere kuona kuti ruzivo rwunopihwa nderwechizvino uye rwakarurama!
Chii chaungaite kuti ubatsire?
Ive neshuwa yekuisa yako zita rebhizinesi, kero uye nhamba yefoni pane yako saiti. Ita shuwa kuti ruzivo rwako rwakanyorwa rwunowirirana pamasaiti ese. Tinokurudzira kuti vatengi vedu vabudise ruzivo urwu zvakajeka pane peji rega rega.
Nyora uye chengetedza bhizinesi rako neGoogle neBing.
Shandisa akapfuma snippets emabhizinesi emuno mukati mewebsite yako kuitira kuti injini dzekutsvaga dziwane ruzivo rwakakodzera rwenharaunda.
Kana paine mukana wekuti bhizinesi rako ritaurwe muchinyorwa, kuburitswa kana blog post - ive shuwa sanganisira kero yako yekutumira uye nhamba yefoni. Aya madudziro mukati mezviri mukati memashoko akakosha aunoda kuve akakodzera kwaari anobatsira kwazvo.
Ungawana sei Citation saiti?
Whitespark ine yemunharaunda citation tsvaga. Icho chishandiso chinokutendera iwe kuti uise ma keyphrases uye uone kumwe kusiana kwemakiyi prhases. Icho chishandiso chinogadzira iyo citation saiti zvinyorwa kune epamusoro masosi masosi. Zvakare, iyo system inokutendera iwe kuteedzera kuti ndeapi magwaro iwe watove nawo kuti usiri kutambisa nguva yako.
Tags: bdailyzvinyorwaco-kududzirwacocitationszvinyorwa zveGooglelocal searchyekutsvaga injini
Maitiro Emabhizimusi muVanhu zana nemakumi mana kana Mashoma